काठमाडाैं । धेरै मानिसहरु साङलाका कारण निकै समस्यामा पर्ने गर्दछन् । घरका खानेकुरा खाएर, साथै कोठामा फोहोर बनाएर साङ्लाले धेरैलाई हैरानीमा पारेको हुन्छ ।
यस्तोमा विभिन्न औषधी उपचार गर्दा पनि साङ्लालाई मार्न नसकिएको अवस्था छ । कतिपय औषधी अति हानिकारक हुने र दुर्घन्धित हुने हुँदा पनि प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ । आज हामी तपाईंलाई साङ्लो भगाउने केहि घरेलु तरिका बताउँदैछौं । जान्नुहोस् घरेलु उपाय प्रयोग गरि साङ्ला भगाउने केहि तरिका :
१. तेजपात – खानाको स्वाद बढाउन प्रयोग हुने तेजपातको गन्ध साङ्लालाई पटक्कै मन पर्दैन। त्यसैले साङ्ला जम्मा हुने ठाउँमा तेजपात पिँधेर राखि दिनुस्। यसो गर्दा साङ्लाहरू भाग्छन् । तेजपातको गन्ध हराएपछि नयाँ तेजपात राख्नुस्।
२. बेकिङ पाउडर र चिनी– एउटा कचौरामा बराबर मात्रामा बेकिङ पाउडर र चिनी मिसाउनुस् । अब त्यसमा पानी हाल्नुस् । त्यसपछि यो मिश्रणलाई साङ्ला भएका ठाउँमा छर्किनुस् । चिनीको मिठासले उनीहरूलाई लोभ्याउँछ अनि बेकिङ पाउडरले मारिदिन्छ।
३. ल्वाङ– ल्वाङको गन्ध पनि साङ्लालाई मन पर्दैन । साङ्ला आउने ठाउँमा ल्वाङका कल्ली राख्नुस् ।
साथै, यसबाहेक मट्टीतेल, नीम, पुदिना र कफीले पनि साङ्लालाई भगाइदिन्छन् । एजेन्सीबाट